Phyu Phyu Thin Sympathizer: 11/01/2007 - 12/01/2007
0 comments at 10:13 PM Labels: poem
ကိုမွှေး/ Saturday, November 24, 2007
ကြေကွဲခြင်းတွေ တနင့်တပိုးနဲ့ နာကျင်ရတဲ့ ကဗျာလေးပါ။
0 comments at 6:49 PM Labels: poem
အဖေသို့ . . .
အဖေ့ရဲ့ နောက်ဆုံး . . . နောက်ဆုံး . . . သမီးကိုနားလည်နိုင်ပါစေ။
*မဖြူဖြူသင်းနှင့် တမလွန်ကို ရောက်ရှိသွားသော သူ့ဖခင်အတွက် ခံစားနားလည်မှုနှင့် ရေးသားဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါသည်။*
အပေါ်မှာ တစ်ပိုဒ်ချင်းရေးခဲ့ပြီး နောက်တစ်ပိုဒ်မှာ အဲလို ပြန်စုစည်းပေးလိုက်တဲ့ ရေးဟန်လေးက သိပ်ကို သေသပ်လှပပါတယ်.
ခံစားချက်တွေပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ. မဖြူဖြူသင်း ဖတ်ခွင့်ရစေချင်ပါတယ်
ကဗျာလေးက ထိတယ်ဗျာ။ ကရုဏာ ရသကိုပေးစွမ်။တယ်။ မဖြူဖြူသင်း ဖတ်ခွင့်ကြုံပါစေဗျာ။ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ပပျောက်ပါစေ။
November 28, 2007 4:52 AM
0 comments at 5:01 PM Labels: poem
0 comments at 8:51 AM Labels: poem
ဒီဗွီဘီမှာတွေ့တဲ့ မဖြူဖြူသင်းရဲ့ ကဗျာ။
0 comments at 2:37 AM Labels: General news, Home Affairs, Interview
0 comments at 2:29 AM Labels: General news, Home Affairs, Interview
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မူ ပပျောက်ရေးနေ့ တွင် ပြောကြားချက်
ဒီဗွီဘီ ၊ ၂၅ ၊ နိုဝင်ဘာ ၊ ၂၀၀ရ
" - - - အမျိုးများရဲ့အရေးကို အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရနိုင်တယ်လို့ သဘောပေါက်ထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ မြန်မာ အမျိုးသမီးများရဲ့  အရေးကိုသာလျှင်မက တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကို ကျမတို့က ဂုဏ်ပြုထောက်ခံ အပ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လုံခြုံမှုကင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေးကိုလဲ တဒေါင့်တနေရာက ထည့်သွင်းပြီး၊ အရေးယူ စဉ်းစားတဲ့အတွက် ကျမတို့အနေနဲ့ အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲ မြန်မာ့ အမျိုးသမီးများ အားလုံးနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီးတွေ အားလုံး စုပေါင်းပြီးတော့ ဆက်လက်ပြီးတော့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ရရှိဖို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။- - - "
0 comments at 9:55 PM Labels: General news, Home Affairs, Interview
ဖခင်ရဲ့ ဈာပနနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားချက်
go to http://drlunswe.blogspot.com please. it'sablog full of info for you.
ဒေါက်တာလွန်းဆွေရဲ့ ဘလော့ဂ်သို့ သွားပါ။ သတင်းအချက်အလက်များစွာ တွေ့ရပါမည်။